रजश्वलाका बेला पेट दुख्छ ?? कम गर्न यसो गर्नुहोस् !!! | Hulaki Online
रजश्वलाका बेला पेट दुख्छ ?? कम गर्न यसो गर्नुहोस् !!!
काठमाडौँ । महिनावारी वा रजश्वला जे भने पनि यो प्राकृतिक नियम हो । तर यो प्राकृतिक तालीकाले कुनै युवतीलाई ज्यानै लिने गरी पेट दुखाएका कारण उनीहरुले त्यो दिनको स्मरण नै गर्न चाहँदैनन् । पेट, कम्मर र ढाडमा हुने पीडा महिनावारी अनियमित हुँदा हुने गर्दछ र यस्तो पिडालाई सहन निकै गाह्रो हुने तपाइहामीले हाम्रै घरपपरिवारका दिदी बहिनी र आफन्तहरुमा देख्दै भोग्दै आएकै छौँ ।
महिनावारीमा अनियमितता हुने भएका कारण कुनै पनि महिलाका लागि महिनाका ती दिनहरु निकै तनावपूर्ण र पीडादायक हुने गर्दछ । कहिले महिनामा दुईपटक वा दुई महिनामा एकपटक हुने गर्दछ । कहिलेकाँही निकै चिसो खाना खानाले महिनावारी नियमित हुने गर्दैन भने कहिले निकै गर्मी कुराहरु खानाले महिनावारी हुने गर्दछ । महिलाले महिनावारी हुँदा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो बेलामा के कस्ता खानेकुरा खाने भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न फलफुलहरुले दुखाइको पिडालाई कम गर्ने गर्दछन् । गाजरको सेवनले महिनावारीको पीडालाई कम गर्ने गर्दछ । स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार, एक गिलास पानी र जुसले पनि माहिनावारी भएको बेला रक्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पीडाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ । त्यस्तै महिनावारीको दौरान एक चम्चा महमा घिउकुमारी मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गर्ने गर्दछ ।
पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानाले पनि पिडा निको हुनसक्छ । त्यस्तै एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमालेर खाँदा यसले केही सहजता थप्छ । तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ । त्यस्तै विभिन्न किसिमका व्यायामले पनी युवतीको दुखाईलाई कम गर्ने काम गर्दछ ।